यी चर्चित भारतीय कलाकार कसले कति पढेका छन् ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com
यी चर्चित भारतीय कलाकार कसले कति पढेका छन् ?
भारतीय फिल्म नगरी अर्थात बलिउडका नाम चलेका हिरो, हिरोइनले कति पढेका होलान् ? पक्कै पनि पढे–लेखेकै होलान् भन्ने आम सोचाई हुन सक्छ तर यथार्थ फरक छ । नेपालमा पनि कलाकारहरुको शिक्षालाई लिएर बेलाबखत चर्चा हुने गर्छ । तर, बलिउडका केही कलाकारहरुको पढाईको स्तर थाहा पाउनु भयो भने अचम्मित बन्नु हुन्छ ।
धेरै चर्चित भारतीय कलाकारहरुको औपचारिक अध्ययन एकदमै कम रहेको एक भारतीय न्यूज एजेन्सीले दाबी गरेको छ । स्रोतका अनुसार बलिउडका सुपरस्टार सलमान खानले मात्रै स्कुलको पढाई पुरा गरेका छन् भने नायिका करिष्मा कपुर ५ कक्षा मात्रै उतिर्ण रहेको जनाइएको छ । बलिउडकी चर्चित नायिका कैटरिना कैफले कहिल्यै पनि स्कुल–कलेजको मुख नदेखेको दाबी गरिएको छ ।
कैटरिना लण्डनमा बस्नुअघि परिवारका साथमा चीन, जापान, फ्रान्स, स्वीजरल्याण्ड, पोल्याण्ड, जर्मनी, बेल्जियम लगायतका देश पुगिन् । लगातार स्थान परिवर्तन हुने कारणले कैटरिनाको स्कुल–कलेजमा पढाई भएन । कैटरिनाको जतिपनि किताबी ज्ञान छ, त्यो सबै घरमा नै भएको बताइएको छ । यस आधारमा उनको शैक्षिकस्तर शून्य छ ।
त्यस्तै पूर्व विश्व सुन्दरी समेत रहेकी नायिका ऐश्वर्या रायले मुम्बईको जयहिन्द कलेजमा एकवर्षको पढाईपछि आर्किटेक्चर पढाईको लागि अर्को एक कलेजमा भर्ना भएपनि पढाई बीचैमा छाडेको कारण ऐश्वर्या स्नातकमुनी अर्थात् अन्डर ग्रयाजुएट भएको बताइन्छ ।
त्यस्तै सन् ११९० को दशककी स्टार नायिका करिश्मा कपुर बलिउड फिल्म उद्योगमै दोस्रो कम शिक्षित हिरोइन भएको जनाइएको छ । करिश्माको पढाई ५ कक्षा पास मात्रै हो । उनले छैठौं कक्षाको पढाई गर्दागर्दै छोडेकी थिइन् र १७ वर्षकै उमेरमा ‘प्रेम कैदी’ नामक हिन्दी फिल्मबाट आफ्नो अभिनय यात्रा सुरु गरेकी थिइन् ।
त्यस्तै नायिका प्रियंका चोपडाले लखनऊ, अमेरिका लगायतमा गरेर हाई स्कुलसम्मको मात्रै पढाई गरेकी छिन् । बलिउडमा पछिल्लो पुस्ताका चल्तीका नायक रणवीर कपुर पनि ग्रयाजुएट नभएको दावी उक्त न्यूज एजेन्सीले गरेको छ ।
त्यस्तै नायिका कंगना रानावत १० कक्षा मात्रै पास छिन् । कंगनालाई अंग्रेजी राम्रोसँग बोल्न नजानेको भनेर बलिउडमा निकै हेप्ने गरिन्थ्यो । बलिउडमा मिस्टर पर्फेक्सनिस्टको उपमाले चर्चित हिरो आमिर खान १२ कक्षा मात्रै उतिर्ण छन् ।
त्यस्तै बलिउडकी ‘काली सुन्दरी’ नायिका बिपाशा बसु पनि १२ कक्षा मात्रै उतिर्ण छिन् । बलिउडका सुपरस्टार सलखान खानले ११ कक्षामा भर्ना लिएपनि परीक्षा नदिएका कारण उनी १० कक्षा मात्रै उतिर्ण भएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै अक्षय कुमार पनि स्कुलको पढाई पुरा गरेपछि कलेज त भर्ना भए तर पढाई पुरा नगरी मार्सल आर्टतर्फ लागेका थिए । त्यस्तै अभिषेक बच्चन पनि अन्डर ग्रयाजुएट हुन् भने अर्का नायक इमरान खानले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित स्कुलमा हाई स्कुलसम्मको पढाई गरेका छन् ।
त्यस्तै सैफ अली खानसँग पनि कुनै डिग्री छैन भने नायिका अनुष्का शर्मा पनि अन्डर ग्रयाजुएट भएको दाबी गरिएको छ ।
नेकपा एकताले पायो पूर्णता
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ । अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य विभाजन, विभागहरु गठनबारे सहमति जुटाएका हुन् ।
अध्यक्षद्धयबीच भएको छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसमेत सहभागी भएका थिए ।
भोलीदेखि इन्टरनेटको मुल्य बढ्ने
सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने अडान नछाडेपछि साउन गते अर्थात बुधबारदेखि इन्टरनेटको शुल्क बढ्ने भएको छ ।
सरकारले नै सेवा शुल्क लिने भएपछि आफूहरु शुल्क बढाउन बाध्य भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था आईएसपीएनले जनाएको छ । गएको वर्ष नै सरकारले १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने बजेटमा उल्लेख गरेको थियो ।
त्यसको ब्यापक विरोध भएपछि सेवा प्रदायकलाई अन्य शीर्षकमा सहुलियत दिएर इन्टरनेटको शुल्क नबढाउने सहमति भएको थियो । तर सरकारले सम्झौता गरेअनुसार अन्य शीर्षकमा छुट नदिएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भोलिदेखि उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत मूल्य बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।
काठमाडौं। मुलुकमा केही दिनअघि परेको वर्षापछिको बाढीपहिरो र डुबानका कारण आज मध्याह्नसम्म ७८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३२ बेपत्ता र ४० जना घाइते भएका छन्। गृह मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार असार २६ गतेदेखि परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोमा परेर १७ हजार ४२० घरधुरी विस्थापित भएका र तीन हजार ३६६ जनाको उद्धार गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख वेदनिधि खनालले ती घरधुरीका मानिसलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राखिएको र राहत वितरण कार्यलाई तीव्रता दिएको बताए।
अझै केही दिन आंशिक र केही स्थानमा बढी वर्षा हुने अनुमान जल तथा मौसम विज्ञान विभागको छ। अहिलेसम्म बाढी पहिरो र डुबानबाट ३२ जिल्ला प्रभावित भएको छ। बेपत्ताको खोजी र राहत कार्य तीव्र पारिएको सरकारले जनाएको छ। तीनै तहका सुरक्षा निकायका ४१ हजार बढी जनशक्ति उक्त अभियानमा सक्रिय छन्।
उदयपुर–गाईघाट–खोटाङ, खोटाङ–हलेसी–तुवाचुङ, महोत्तरी–जनकपुर–जलेश्वर (भाप्सी खोला डाइभर्सन), सिन्धुली–मध्यपहाडी लोकमार्ग, कान्ति लोकपथ (हेटाँैडा), कुलेखानी–फाखेल–फर्पिङ, बेँसीशहर–मनाङ, धुञ्चे–रसुवागढी सडक खुलाउने प्रयास जारी रहेको सरकारले जनाएको छ।
यस्तै हेटौंडा–दक्षिणकाली, भालुवान–प्युठान, गोरखाको बाह्रकिलो–बारपाक तथा साघारादेखि सिरहा जाने हुलाकी राजमार्गसमेत खुलाउने प्रयास भइरहेको छ। केही सडक भने सञ्चालनमा आइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
तीनै तहका सरकारले राहत वितरण कार्यलाई तीव्रता दिएका छन्। त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधिजस्ता अत्यावश्यक सामग्री स्थानीय तह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, निजी क्षेत्र, रेडक्रस, मानवीय सहायताका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाले राहत वितरण गरिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश नं ३ को गोदाम घर हेटाँैडाबाट सिरहा, सर्लाही, रौतहट र महोत्तरी जिल्लाका लागि तीन–तीन हजार थानका दरले १२ हजार वटा त्रिपाल र चार रोल म्याटसहित राहत सामग्री पठाइएको छ। गृह मन्त्रालयले ललितपुर जिल्लाको गोटीखेल र गिम्दीका लागि हेलिकप्टरबाट ४० थान त्रिपाल पठाएको र तराईमा थप एक हजार १०० थान त्रिपाल र जेनेरेटर पठाएको जनाएको छ।
प्रदेश नं २ को सरकारले उद्धार तथा राहतमा खर्च गर्ने गरी आठवटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका लागि रु १० लाखका दरले उद्धार तथा राहत खर्च उपलब्ध गराउने एवं मृतक परिवारलाई प्रतिमृतक रु तीन लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको समेत गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
बाँके। सरकारले असार पहिलो सातादेखि भारतबाट भित्रिने तरकारी र फलफूलमा विषादी जाँच ग¥यो । त्यसको दुई साता नबित्दै जाँच रोकियो।
कर्मचारी अभावका कारण जाँच रोक्नुपरेको सङ्घीय सरकारले जनाएको छ। सङ्घीय सरकारले भनेको छ, “आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गरेर एक वर्ष्भित्रै जाँच पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनेछ।”
यसरी सङ्घीय सरकारले जाँच रोके पनि प्रदेश सरकारले भारतबाट भित्रिने तरकारी र फलफूलमा विषादी जाँच गर्ने बताएपछि नेपालगञ्जमा एक साता अघिदेखि जाँच पुनः शुरु गरियो तर जाँच गर्ने कर्मचारीको अभाव देखाउँदै पुनः जाँच रोकिएको छ। पूर्वतयारी नै नगरेर शुरु गरेको जाँच पटकपटक रोक्नुपरेको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण एकाइ नेपालगञ्जले जनाएको छ।
कृषि ज्ञान केन्द्र बाली संरक्षण अधिकृत सकिल अहमदले कर्मचारी अभावका कारण समस्या भएको बताए। उनले घरायसी कामले काठमाडौँ गएपछि विषादी जाँचको काममा झनै बाधा पुगेको छ। विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण एकाइका अनुसार नियमित जाँच गर्न बाली संरक्षण अधिकृत अहमदलाई जिम्मेवारी दिइए पनि एक्लैले काम गर्न नसक्ने भएपछि जाँच निरन्तर हुन सकेको छैन।
कर्मचारी नहुँदा विषादी जाँच रोकिएपछि भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारी र फलफूल निर्वाधरुपमा विना जाँच भित्रिरहेको छ। विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण एकाइ नेपालगञ्जका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगरका अनुसार विषादी जाँचलाई निरन्तरता दिन स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग थप कर्मचारीसमेत माग गरिएको छ।
“हामीले विषादी जाँचका लागि बाली संरक्षण अधिकृत एक जना, दुई जना प्राविधिक र कार्यालय सहयोगी एक जना हुनुपर्ने माग गरेका छौँ”, उपप्रमुख मगरले भनिन्। उपभोक्ता सबैले आफूले तरकारी उत्पादन गरेर खाने बानी बसाल्न अनुरोध गरेको बताइन्। केही दिनयता भारतीय तरकारीको नमूना भन्सार कार्यालयले नपठाएकाले पनि जाँच हुन नसकेको बाली संरक्षण अधिकृत अहमदले बताए।
भारतबाट आउने तरकारी मात्र नभएर नेपालगञ्जमा विभिन्न स्थानबाट आउने तरकारी र फलफूललाई मण्डीमा नै कहिले जोर नम्बर र विजोर नम्बर मिलाएर र कहिले जोर विजोर क्रस गरेर जाँच गर्ने योजना रहेको बाली संरक्षण अधिकृत अहमदले बताए। अहिले आउने हरियो तरकारीमा अन्यभन्दा बढी विषादी भेटिएको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण एकाइले जनाएको छ।
उनले केही दिनयता भारतबाट भित्रिने तरकारीमा अत्यधिक विषादी मिसाइएको हुनसक्ने भएकाले सजग रहन उपभोक्तालाई आग्रह पनि गरिएको छ।
दीय समितिका बैठक स्थगित, बाढी पीडितको उद्धारमा जान कांग्रेसको प्रस्ताव काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरेको भन्दै आक्रोशित नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले संसदीय समितिको बैठक स्थगित गर्न माग गरेका छन्। नेपाली काँग्रेसका प्रतिनिधिसभाका सांसदद्वय डा. डिला संग्रौला र दिव्यमणि राजभण्डारीले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितको सहयोगका लागि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्ने उल्लेख गर्दै संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक पनि स्थगित गर्न समितिका सभापति शशी श्रेष्ठसँग माग गरेका हुन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै समितिकी सदस्य समेत रहेकी काँग्रेस सांसद संग्रौलाले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितका लागि राहत दिन निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्ने भन्दै एक हप्ता बैठक स्थगित गर्न समितिका सभापति श्रेष्ठसँग माग गरेकी हुन्। उनले पीडितलाई साथ दिन आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएकाले संसदीय समितिको बैठक पनि स्थगित हुनुपर्ने तर्क गरिन्।
काँग्रेसका अर्का सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले पनि संसदीय समितिको बैठक स्थगित गर्न माग गरे। उनले जनता पीडामा रहेका बेला राहत तथा उद्दारमा सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्ने भएकाले संसदीय समितिको बैठक बोलाउन नहुने जिकिर गरे। सांसद प्रेम सुवालले पनि एक हप्ता समितिको बैठक स्थगित गर्न माग गरे।
उनले बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडित जनतालाई राहत दिन सांसदहरुलाई आ–आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा जान भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको उल्लेख गर्दै समितिको बैठक पनि स्थगित हुनुपर्ने बताए। यता, सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले भने कानुन निर्माणको काममा ढिलाई हुने दावी गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएपनि संसदीय समितिका बैठकहरु भने स्थगित गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।
प्राकृतिक बहाव रोक्दा क्षति